Lumen5: Dzokorora Zvinyorwa Mune Zvemavhidhiyo Vhidhiyo Uchishandisa AI | Martech Zone
Lumen5: Dzokorora Zvinyorwa Mune Zvemavhidhiyo Vhidhiyo Uchishandisa AI
Svondo, Kurume 25, 2018 Douglas Karr
Hazviwanzo kuita kuti ndinzwe kufara pamusoro pechikuva zvekuti ini ndinonyoresa ipapo ipapo kuaccount account, asi Lumen5 inogona kunge iri vhidhiyo yekushandisa vhidhiyo. Iyo yemushandisi interface inoshamisa, kushomeka kugadzirisa kunoita kuti zvinhu zvive nyore, uye mitengo iri chaiko pakanangwa. Heino pfupiso vhidhiyo:
Lumen5 Yemagariro Vhidhiyo Platifomu Inosanganisira:
Rugwaro kuVhidhiyo - Nyore shandura zvinyorwa uye mablog mablog kuita vhidhiyo zvemukati. Iwe unogona kuita izvi nekupinda RSS Kudya, kuisa chinongedzo kuchinyorwa chako, kana kuteedzera uye kunamira zvemukati zvako.
Zvoga Workflow - Lumen5 inosanganisa iko kushandiswa kwehungwaru hwekunyepedzera uye kudzidza kwemuchina kuvaka zviitiko zvako, gadzirira-kuisa mameseji ako, uye kuratidza mazwi akakosha. Ehezve, zvese zvinogona kuchinjwa uchishandisa anovaka - asi zvinokupa iwe musoro wepamusoro!
Media Library - Raibhurari inotsvaga nemamirioni emahara midhiya mafaera, kusanganisira vhidhiyo, achiri mifananidzo, uye mumhanzi.
Branding Sarudzo - Gadzirisa ako mavhidhiyo kuti aenderane nekutaridzika uye kunzwa kweako brand. Unogona kusarudza kubva kune mamwe mafonti kana kurodha yako wega. Pamusoro pezvo, iwe unogona kurodha yako wega logo uye watermark!
Video Formats - Zvichienderana nechirongwa chaunonyorera, unogona kupa mavhidhiyo mu480p, 720p, kana 1080p pamwe nekugadzira chikamu chegumi nenomwe: 16 mafomati epasi kana 9: 1 mativi fomati yemapuratifomu senge Instagram.
Kubatanidzwa kweFacebook - Nyorera vhidhiyo yako kuFacebook pane yako yega account kana yako Facebook peji.
Mukati memaminetsi, ini ndaive ndokwanisa kuvaka nekugadzirisa vhidhiyo iyi yechinyorwa chazvino chandakanyora pamusoro yenguva manejimendi matipi evashambadzi.
Uye, mukati memasekondi ndakange ndave kukwanisa kuteedzera vhidhiyo uye kuiseta kuti ive Instagram.
Vaka Yako Yekutanga Yemagariro Midhiya Vhidhiyo
Tags: facebook vhidhiyoinstagram vhidhiyolumen5gadzira vhidhiyoyemagariro vhidhiyomugadziri wevhidhiyo
Kumwe Kunze Pakati peSSPAM neCreepy Lies Transparency